क्राइम सिन : के उखुबारीमा भएको थियो निर्मलाको हत्या? (#WhoKilledNirmala शृङ्खला ३)
26th November 2018, 06:41 pm | १० मंसिर २०७५
घटनाको चार महिनापछि गत साता भूपू सैनिक मोतीबहादुर नेपालले हामीलाई साइकल र कापी भेटिएको स्थान यसरी देखाए -
घटनाको चार महिनापछि हामी पुग्दासमेत उखुबारीभित्र हुँदै शव भेटिएको ठाउँसम्म पुग्न गाह्रो भयो। यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ -
अब प्रश्न उठ्छ - के घटनास्थल त्यही हो?
पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी केही अपराधीहरुले अपराध गर्न मौकाको खोजी गर्ने बताउँछन्। मान्छे नहुने र एकान्त ठाउँमा नै बढी यस्ता घटना हुने गरेको देखिएको उनको अनुभव छ। भन्छन्, 'एक्सिडेन्ट्ली यस्तो अपराध भएको भए बेग्लै हो। अपराध योजनावद्ध हो भने, यस्ता घटनामा कसैले नदेख्ने र सुरक्षित ठाउँ नै खोज्ने गरेको देखिन्छ।'
गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा पनि शवको अवस्थाको विवरण उल्लेख छ - शवको आधा शरीरसम्मको भाग पानीमा रहेको र बायाँ खुट्टा आधा खुम्च्याएको अवस्थामा छ। नली खुट्टादेखि आधा तिघ्रासम्मको भाग पानीमा डुबेको छ। दायाँ खुट्टाको गोलीगाँठोदेखि तिघ्रासम्मको भागसमेत पानीमा डुबेको, मुखको भाग सीधा जमिनतर्फ फर्की पानीमा डुबेको छ। दायाँ हातको नाडीदेखि पाखुरासम्मको भागसमेत पानीमा डुबेको अवस्थामा छ।
मानिस मर्नुभन्दा अघि शरीरको अंग खुम्चिने, तन्किने प्रकिया हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल फोरेन्सिक डिपार्टमेन्टका निर्देशक डाक्टर प्रमोदकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'जब मानिस मर्छ, तब शरीरको एटिपी* भन्ने तत्व कम हुँदै जान्छ। यसको कारण बिस्तारै शरीरका अंगहरु कक्रिने वा खुम्चिने हुन्छ। मानिस मरेको ४ वा ६ घण्टापछि यस्तो देखिन्छ।'
'मानिस मरेपछि अन्य अंगहरु पनि कडा हुँदै, खुम्चिँदै र कक्रिँदै जान्छ। तर, धेरैको ध्यान हातमा जान्छ,' डा. श्रेष्ठ भन्छन्, 'जस्तोसुकै प्रकृतिको मृत्यु भए पनि शरीरको अंग कक्रिएको नै हुन्छ।'
अहिले प्रहरी 'क्राइम सिन' नै त्यही ठाउँ भएको भनेर ठोकुवा गर्दैन, ‘हुन पनि सक्छ’ चाहिँ भन्छ।
'घटनाको प्रकृति हेर्दा घटनास्थल त्यही पनि हुन सक्छ भन्ने हो। तर, अहिले नै यही नै हो भन्न सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छैनौं,' कञ्चनपुर जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपी कुबेरबहादुर कठायतले भने। घटना हुँदाताकाका एसपी दिल्लीराज विष्टपछि जिल्लाको कमान्ड अहिले उनैले सम्हालिरहेका छन्।
यदि त्यो ठाउँ 'क्राइम सिन' होइन भने अर्को कुन ठाउँ हो त?
यी सब कारणले होटलदेखि उखुबारीसम्म शव व्यवस्थापन गर्न अत्यन्तै जोखिम देखिन्छ। पूर्व डिआइजी मल्ल भन्छन्, 'अपराधीले जोखिम कम हुने विकल्प नै रोज्छन्।'